लेकसाइडमा रातको ११ बजेपछि, केटाकेटीको रमीता ! बाटोमै शारीरीक सम्बन्ध राखेको देखेपछि यस्तो गरे स्थानियले – Samacharpati Samacharpatiलेकसाइडमा रातको ११ बजेपछि, केटाकेटीको रमीता ! बाटोमै शारीरीक सम्बन्ध राखेको देखेपछि यस्तो गरे स्थानियले – Samacharpati
लेकसाइडमा रातको ११ बजेपछि, केटाकेटीको रमीता ! बाटोमै शारीरीक सम्बन्ध राखेको देखेपछि यस्तो गरे स्थानियले
पोखरा, २८ साउन । पर्यटकीय नगरि पोखरा, लेकसाइड पोखराभित्रको पनि पर्यटकीय केन्द्र हो । यहाँका सरोकारवालाहरुले पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समय लेकसाइडमा एउटा आवाज चर्कैसंग उठिरहेको छ । कुरा हो रात्रीकालीन व्यवसाय । लेकसाइडलाई २४ सै घण्टा खोल्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला पोखरामा सचालन भईरहेका डिस्कोथेक, डान्सबार र पवका कारण वातावरण अराजक बन्दै गएकोमा लेकसाइडवासीले गुनासो गरेका छन् ।
लेकसाइडबासीले गुनासो मात्र गरेका छैनन्, उनिहरुले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । उनिहरुको भनाई छ – ‘रातभर सुत्न सकिँदैन । एक प्रहर निँदाउन खोज्यो, हरेक रात कोलाहल छ । बोत्तल हानाहान र केटी तानतान हुन्छ,’ उनिहरुको भनाई छ ‘यस्तो कहिलेसम्म रु चैनसँग सुत्न कहिले पाइन्छ रु’ अहिलेको युवापुस्ता बिग्रिँदै गएकोमा गुनासो समेत गरेका छन् ।
पश्चिमाञ्चल होटल संघ सहित केही आमा समूह र व्यवसायी मिलेर ४२ जनाले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रयोग हुने संगीतको ध्वनि र बाजाको आवाज नियन्त्रण गर्नुपर्ने, रातमा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने गाडीको व्यवस्था र आवतजावत सम्बन्धित व्यवसायीले मिलाउनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित व्यवसायीले नै गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनुपर्ने, रंगीबिरंगी बत्ती व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाहिर जान रोक्नुपर्ने, उत्तेजक वा यौन उत्तेजक संगीत रोक लगाउनुपर्ने, अवान्छित गतिविधि अनुगमनका लागि स्थायी समिति व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग गरिएको छ ।
हेर्नुहोस अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरु
श्री स्वस्थानी ब्रतकथा अध्याय २ हेर्नुहाेस
श्री स्वस्थानी ब्रतकथा अध्याय १ हेर्नुहाेस